Ukukhiqizwa Sakhiwo Inkampani liyaqhubeka linamathele ibhizinisi isakhiwo ukuphathwa. On ukuphathwa, ochwepheshe ngokwethukela anjengokuthi nefilosofi.
Akuseyona ngokwanele ukuthi ube abasebenzi lwabaphathi eyodwa noma ngaphezulu, okungase kube nesiqiniseko sokuthi kunokuthula nokwakheka kwalo ezingeni eziphambili. umthengi izimfuno izinga nokwehluka izimpahla abakhiqizi futhi abathengisi ngesikhathi ebizela othile izimo zabo.
Namuhla ukulawula theory zingatholakala onobuhle eziningi yenhlangano isakhiwo inkampani. Kwabaningi, kungaba elingalodwa futhi functional komugqa isakhiwo.
isakhiwo inkampani ngayinye ukukhiqizwa sika kunezinzuzo zako kanye nebubi. Imibandela ethile ibhizinisi sithole nokufaneleka kukhethwa isakhiwo elilungile. isakhiwo Inkampani siyashintsha nemibandela zangaphakathi nezangaphandle kokushintsha, ukucacisa isakhiwo sabo esikhathini esidlule.
Underestimating ukubaluleka isakhiwo sangempela ibhizinisi kuholela ekulahlekelweni izikhundla yanqoba emakethe.
Nge izakhiwo eziningi komugqa uqale. Kulula ukuziqonda, ahlele aphinde somqondisi.
Isakhiwo komugqa ibhizinisi ichaza ngokusobala zone of umthwalo abaholi, ikuvumela ukuba ahlele ngokucacile ukuqapha izinguquko kanye nokuqapha imiphumela. Inhloko komugqa mpo nesibopho sokubhekela konke mpo bese ibika Umqondisi kuphela.
Ukukhiqizwa Inkampani isakhiwo isakhiwo komugqa siyasebenza ezimweni eziphuthumayo noma uma kudingeka eqa qualitative emakethe.
Zonke izici ezinhle komugqa isakhiwo ukukhiqizwa olungadalulelwa kuphela uma inkampani ukuphathwa yakhiwa ochwepheshe we ekilasini eliphakeme.
Uma izisebenzi ukuphathwa inenkinga, bayoba ngokushesha ziboniswe ukwehluleka kwamabhizinisi endaweni inkinga.
Ngamanye amazwi, uma inkampani has a isakhiwo komugqa, isabelo ingozi yangaphakathi kwandisa isisindo sakho. Iphutha olulodwa enkulu umphathi ilindelwe ucabanga ephelele yebhizinisi.
Ngesikhathi esifanayo, isakhiwo eqondile kuqinisekisa ukusebenza kahle esiphezulu ekuphathweni ikhanda ngenxa ubunye umyalo kanye nokuxhumana ngokucacile zonke izakhiwo ngamunye mpo.
Lezi zimfanelo izakhiwo zomugqa phezani usebenze ngokushesha nje lapho ibhizinisi kukhona izinhlobo eziningana izitshalo adinga ukusebenzisana nomunye.
Isakhiwo komugqa siyasebenza ekuqaleni, kodwa akuyona ngempumelelo ekuthuthukiseni ibhizinisi.
Isakhiwo nemisebenzi yokusetshenziswa ibhizinisi kuvamile izinhlangano ezisebenza ezimweni zemvelo azinzile futhi ube inani elilinganiselwe imisebenzi.
Lezi zimo avumela ukuba kube Standardization ngokugcwele futhi ubunye ukukhiqizwa, Ukuhlale usesikhathini. Enterprises ezisebenza emakethe enjalo akwanele. Ngokwesibonelo, sibala nalabo abasebenza izimakethe of izinto zokusetshenziswa kanye izinto, yokusansimbi namakhemikhali umkhakha.
isakhiwo Functional ikuvumela yokwakha kanye nokugcina ephezulu ezingeni amazinga ibhizinisi kuwo wonke amasevisi. abaphathi abanekhono izakhiwo obusebenzayo anganikeza konke ababekudinga ukuze ukuzinza emakethe. Ngesikhathi esifanayo, isakhiwo amakhanda blurs umthwalo futhi kudalela ku nokudidiyela izinqumo zokuphatha.
Isakhiwo kwenza kube nokwenzeka ukuba athathe amanye kulelo ukuphathwa umthwalo nge abaphathi line, okuvumela ukuba sithuthukise ikhono lakhe ezindabeni ezimbonini.
Uma izimo zemvelo ukuthi mahle khona kwesihogo obusebenzayo isakhiwo ushintsho - isakhiwo kwezezimboni ibhizinisi kumele bashintshe. Kungenjalo, isakhiwo abakhona bazokhishwa enezinkinga kule ndawo entsha futhi inkampani ulindele ukuba ezikweletini.
Logistics: kuyini futhi yiziphi izinhloso zayo?
Imodeli Functional. Ukwakhiwa imodeli "njengoba 'futhi' kanjani ukuba"
Can kanina ubuhlengikazi amapetshisi nectarines?
IL "Junker": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nokubuyekeza
Rye bran - izinsalela sweet corn